Photos Teny amin’ny Lapan’ny Fitsarana 09 fev 2011 – MyDago.com aime Madagascar
Photos Teny amin’ny Lapan’ny Fitsarana 09 fev 2011
Lapan'ny Fitsarana 09 fev 11
Auteur Solo RazafyPublié le 9 février 2011 Catégories Malagasy, PolitiqueÉtiquettes Justice, Prisonniers politiques
3 réflexions sur « Photos Teny amin’ny Lapan’ny Fitsarana 09 fev 2011 »
Efa afaka mahita ny fianakaviana aloha dia efa tsara, koa dia arahabaina.
Kanefa tsy tokony adinoina, fa sazy miantona mbola eo. Midika izany fa Fitsaràna tsy miaro ny mponina ny ao M/car, fa fitaovam-pamoretan’ny FATy . Mpiray tsikombakomba !!!!
Mba jereo ny hetsika ataon’ny Mpiasan’ny fitsaràna rehetra ( na mpisolo vava izany na mazistrà ) eto Frantsa amin’izao fotoana izao, mba ho fanoerana ny « fampitahorana sy fanendrikendrehana » navaokan’ny vavan’i Sarkozy !
Mety misy te-hihetsika ihany fa matahotra e!
Tsy tahotra anie no nidiranreo tao fa hitsara am-pahamarinana e! Raiso ny andraikitra ry mpitsara o!
Scenario burlesque : Iza no « hitsara » ny Mpitsara rahatoa ka gadrainy DAHOLO ny mpitsara ???
Hanafatra mpitsara frantsay « hitsara » ny mpitsara gasy ?
Ny mpitsara gasy mihintsy no tsy te-hietsika ny ankamaroany, fa sao dia mihena ny karama !!!
Efa tamin’ny 2009 aho no nilaza fa raha mba nihetsika ny fonctionnaires sy ny mpitsara, na 4 andro fotsiny aza, dia tsy toy izao no niafaran’ny tantara !
Nanaiky Coup d’Etat ! Sa tsy fantany akory izany hoe coup d’Etat izany ?
Misy firy ny isan’ny fonctionnaires ? Raha mandeha mitokona na mivory ao Mahamasina daholo ve ny fonctionnaires REHETRA, miaraka amin’ny VAHOAKA, dia inona no ho ataon’ireo mpanongana ireo ? Ho alefany eny Antanimora sa aiza daholo ny olona ?
Hanangana « Camp de concentration vaovao » mihintsy ?
Précédent Article précédent : Video – Rodin au Magro 08 fevrier 2011
Suivant Article suivant : Photos – Fivoahana an’Ambatolampy ! (09 fevrier 2011)